Mutengo wekuyera Kununurwa Kusiyanisa neInbox Mitengo | Martech Zone
Kana ivo vePosvo Service vaine gaba remarara panzvimbo yavo uye, pese pavanoona chidimbu chetsamba isina chinhu ichiuya kuburikidza vaikanda yese mumarara, ungati iyo yaunzwa? Chokwadika kwete! Zvinoshamisa kuti, zvakadaro, muindasitiri yekushambadzira yeemail chero email inoendeswa kune spam folda inoonekwa se Wakaponeswa!
Nekuda kweizvozvo, vanopa email vese avo kuburitswa zvibodzwa sekunge chimwe chinhu chekuzvirumbidza nacho. Zvinosuruvarisa kune vatengi vavo, zvakadaro, mukurumbira wemutumiri, pamwe nehunhu hweanogamuchira kero pane yega domeini, pamwe chete neyemukati zvemukati zvinogona kuburitsa zvinotyisa. inbox kuiswa kune vatengesi. Ichi hachisi chinhu chavanoshuma, zvakadaro.
Ndosaka makambani achinyorera masevhisi emapuratifomu senge 250ok. 250ok inopa vanotumira nemazita embeu anoongororwa kuti vaone kana mushandirapamwe wacho unouita mubhokisi retsamba kana dura re spam. Izvi zvinopa mushambadzi neese anodikanwa ekuzivisa avanoda kuti vagadzirise uye vagadzirise nyaya dzekuendesa - ingave iri mhando yemhando, zvemukati zvemhando, kana nyaya dzezvivakwa.
250ok tiri vatsigiri veMartech uye isu tinoshandisa chikuva chavo kuongorora nekuvandudza yedu yekuisa inbox. 250ok Anoda kudaidza iyi yechokwadi dhirivhari rate. Kuongorora kuiswa uku kunogona kureva zviuru zvemadhora mune yakawedzera yakavhurika, tinya uye shanduko mitengo kune vatengesi veemail.
Tags: 250okkuendesa nganomwero wekutoraemail tinya mitengoemail kuburitsa chikuvaemail inbox chiyeroemail yakazaruka mitengoemail chikuvaemail mbeu mazitaemail vanotumirainbox chiyeroinbox mitengomazita embeuyechokwadi dhirivhari rate
Maitiro Ekudzoreredza Kudonhedza Email Engagement Mitengo